DHEGEYSO: ”Waa idinku daba lunnay!” – Gobollada Sweden oo ka cabanaya talo kasoo baxday hay’ad ka tirsan Dowladda Dhexe | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: ”Waa idinku daba lunnay!” – Gobollada Sweden oo ka cabanaya talo...
(Stockholm) 30 Okt 2020 – Istaraatijiyadda Sweden ee la macaamiliadda cudurka coronavirus ee gugii hore waxaa inta badan la waafajiyey xaaladdii Stockholm, taasoo qaybo badan oo dalka ka mid ah ku adkaysay inay iska xakameeyaan faafitaanka cudurkan, sida ay qabaan dhakhaatiirka xakamaynta cudurrada faafa. Dr Hans Boman wuxuu ka howlgalaa qaybta xakakamaynta cudurrada faafa ee Västernorrland.
”Muuqaalka Stockholm ayaa noqday xiddiga hagaya dalka oo idil, taasoo keentay in gobollo badani ay bilowgiiba raadkeeda raacaan,” ayuu yiri.
Waxaa dhakhtarkaa ku ra’yi ah Dr Lisa Labbé Sandelin, oo qaybta xakakamaynta cudurrada faafa ugu qaybsan Kalmar iyo Dr Signar Mäkitalo, oo markaa isla xilkaa oo kale u hayey Gävleborg.
Previous articleMaraykanka oo Israel siinaya bambo uusan abidkii dagaal u adeegsan oo burburin karta dhufaysyada aasan oo dayuurad gaar ah laga rido (Wax ka baro)
Next articleDHEGEYSO: Booliiska Stockhholm oo heegan sare la geliyey kaddib weerarkii Faransiiska